Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Nin isku dayay inuu rasaas ku furo tareenka dheereeya ee Japan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Safarka Tareenka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Nin isku dayay inuu dab ku qabadsiiyo tareenka dheereeya ee Japan.
Dab-damiska, oo aan iska caabinin in la xidho, ayaa markii dambe u sheegay booliiska in uu "isku dayay in uu koobiyeeyo" mindidii Halloween iyo weerarkii dab qabad ee lagu qaaday tareen magaalada Tokyo bishii hore, kaas oo arkay nin 24 jir ah oo u labisan sida Joker-ka oo dhaawacmay. 17 rakaab ah ka hor inta aan la xirin.
Nin ayaa isku dayay inuu dab qabadsiiyo tareen laga leeyahay dalka Japan, kadib weerar yaab leh oo Isniintii dhacay.
Dab-damis ayaa waxaa xiray booliiska Japan oo isla markiiba raacay tareenka ka dib markii ay si degdeg ah u istaageen.
Shilka subaxnimadii Isniinta ayaa horseeday dib u dhac ku yimid adeega tareenada ilaa 50 daqiiqo.
Nin 69 jir ah ayaa la xiray ka dib markii uu soo saaray dareere gubanaya iskuna dayay in uu dab ku qabadsiiyo tareen aad u dheereeya oo ku sugan dalka Japan.
Ku dhawaad ​​30 qof oo rakaab ah ayaa ku safrayey hal gaari oo uu la socday qofkii is gubay xiliga uu shilku dhacay subaxnimadii Isniinta. Dhammaan rakaabka ayaa ku guuleystay inay si nabad ah ugu baxsadaan baabuurta kale halka kirishbooyada tareenka uu damiyay dabka.
Dab-damis ayaa waxaa xiray booliiska Japan oo raacay tareenka isla markiiba ka dib markii uu si degdeg ah u istaagay.
Dhacdadii maanta ayaa keentay dib u dhac tareenka adeegyada ilaa 50 daqiiqo.
Waxaa dhacay dilal la mid ah weerarrada ee dalka Japan beryahan. Isla bartamihii bishii Oktoobar, nin ayaa mindi ku weeraray laba qof oo kale oo rakaab ah oo ku sugnaa boosteejada tareenada Tokyo. Bishii Ogosto ee sanadkan weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay tareen rakaab ah oo ku sugnaa caasimadda Japan ayaa sababay dhaawaca sagaal qof.